အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ကနေဒါနိုင်ငံမှ N95 Masks များ လာရောက် လှူဒါန်း - Yangon Nation News
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ကနေဒါနိုင်ငံမှ နှာခေါင်းစည်း (N95 Masks) များ လာရောက် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း
(၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ ဂျကာတာ)
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကနေဒါနိုင်ငံမှ နှာခေါင်းစည်း (N95 Masks) ၆၀၀,၀၀၀/- အား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဘရူနိုင်း၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့အတွက် လည်းကောင်း၊ ၉၀,၀၀၀/- အား အာဆီယံအတွင်ရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ လည်းကောင်း အာဆီယံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Diedrah Kelly က ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီအချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ လာရောက်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို အာဆီယံ-ကနေဒါ ဆွေးနွေးဘက်ဆက်ဆံရေး ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ အာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံဆိုင်ရာကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Diedrah Kelly က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမှာ အရှေ့တောင်အာရှ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင်လည်း ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာ ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် N95 Masks များကို ယခုကဲ့သို့ ပေးပို့လှူဒါန်းရခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ကုသတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံမှ အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုး ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံ-ကနေဒါဆက်ဆံရေးကိုလည်း ဘက်စုံထောင့်စုံမှ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမြင့်က ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး နှင့် အာဆီယံ (၆) နိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ အာဆီယံ-ကနေဒါ ပူးတွဲကြေညာချက်တွင်ပါဝင်သည့် ဉီးစားပေးနယ်ပယ် တစ်ခုဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့် ကပ်ရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးရေး အတွက် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းအဖြစ် ယနေ့အခမ်းအနားက ပြသလျက်ရှိကြောင်း၊ အာဆီယံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံအကြား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါသော ဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ် အာဆီယံဘက်မှ အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များချမှတ်၍ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေး သာမက နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များအတွက် ကုစားမှုများ၊ ရေရှည်အစီအမံများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi ကလည်း ကနေဒါနိုင်ငံ၏လှူဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် အာဆီယံအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး ကနေဒါဘက်မှ လှူဒါန်းမှုကို လက်ခံခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံလူမှု-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းရေးရာဌာန ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တို့ ပါဝင်တက် ရောက်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင် ကူးတို့ရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူ ၃၀ ကျော်သေဆုံး၊အများအပြားပျောက်ဆုံးနေ